Inona no karazana lamaody amin'ny fahavaratra 2014?
Tsy dia lavitra loatra ny vanim-potoana mafana, mety efa nieritreritra tsara ny garderobe, saingy mbola miandry ny anjarany ireo kiraro. Ho an'ny fahafinaretan'ny vehivavy lamaody, efa namolavola tetikasa maro ny mpamorona mba hanamaivana ireo tongotra vavy tsara tarehy amin'ity fahavaratra ity. Karazam-bolo vehivavy inona no ho lamaody amin'ny 2014?
Shoe Summer Summer 2014
Amin'ity vanim-potoana ity eo amin'ny lohan'ny lamaody dia ny famirapiratana sy ny hafanam-po izay misy ny kiraro fahavaratra ho an'ny vehivavy 2014. Ny fironana ankehitriny:
Sandapo ambony sy baoty misokatra. Ny mahazatra dia kiraro ankapobeny miaraka amina balsama, fifandraisana maro samihafa ary bindily. Ny kapa goavam-be koa dia tsy mitovy amin'ny isan'ny lela. Sandam-be popana misy kiraro avo. Ankoatra ny lela, ny kiraro dia azo zakaina amin'ny akora sy ny lamosina, kiraro ary ny rivotra.
Boots Summer. Vita avy amin'ny hazavana na haingam-pandehanana, tsy hanelingelina anao izy ireo, fa ianao kosa hijery tsara. Boots efa maotina be mafana be miaraka amin'ny renirano misokatra, vita amin'ny lamba vita amin'ny bibilava.
Kiraro mamirapiratra. Amin'ny lamaody, kiraro mamirapiratra mamirapiratra. Indrindra indrindra ny modely malaza miaraka amin'ny felam-bohiny. Tena kanto sy kanto ny mijery loko marevaka loko mamirapiratra.
Kiraro volamena. Ny loko volamena dia mampanantena fa ny loko lamaody amin'ny lobaka amin'ny fahavaratra 2014. Manampy ny chic sy ny lozam-piravoravoana, ny famirapiratana ary ny hatsaràna. Ary ny kapa volontany tena izy ireo dia eo amin'ny voditongotra sy eo amin'ny làlana fisaka.
Kiraro amin'ny loko pastel. Ho an'ireo izay tsy mpankafy ny zava-drehetra mamirapiratra sy mamirapiratra, ny mpanamboatra dia manomana fanangonana kiran'ny tonon-tony. Ny kiraro dia mety mitovy loko na mampifangarona lamba maromaro maromaro, izay misy lela maro samihafa ihany koa.
Kiraro matevina. Ankoatra ny sary maoderina, ho azonao ihany koa ny mahasoa ny tongotra. Ny kiraro maivana dia ahafahanao mandeha ela be eo amin'ny voditongotra. Amin'ny lafiny, ny voditongotra dia mety amin'ny endrika samihafa.
Kiraro matevina ambony. Tena mitovy amin'ny style retro, izay tena manan-danja amin'ity vanim-potoana ity.
Models amin'ny haingam-pandeha. Tena tsara ho an'ny reny tanora, mandehandeha miaraka amin'ny zazakely eny an-tokontany, na ho an'ny mpifankatia haka fotoana lava.
Kiraro tena mahavariana. Ny mpilalao sarobidy dia manolotra kapa miaraka amin'ny kavina tena izy, kiran'ny loko manjelatra mamirapiratra.
Classic. Ity endri-panajana mandrakizay ity dia a priori tsy misy lamaody. Ireo shoes dia ao amin'ny serivisinao.
Make-up ao amin'ny style of Chicago
Fanamboarana ny fantsika voajanahary 2016
Fehiny lava ho an'ny feno 2013
Hairstyle ho an'ny volo midadasika 2013
Ombre miaraka amin'ny bangs
Andraikitra Ejipsiana 2013
Ny akanjo vavy amin'ny fararano 2013
Fiakanjo japoney 2017 - ny fivoarana tsara tarehy indrindra sy ny sary tsara indrindra amin'ny jaky
Raincoats - Lohataona 2016
Salady tsotra tsotra eo amin'ny latabatra fety
Horsetail ho an'ny fatiantoka
Joshua Jackson: Nandritra ny 10 taona dia niova be ny tontolo
Ireo kintana nesorina ho fanohanana an'i Kim Kardashian
Media: Brad Pitt dia manana raharaha miaraka amin'i Kate Hudson! Ny fianakaviany ihany no mitongilana tsaho!
Hira fisaonana vehivavy
Exclusive Dresses 2013
Medium - iza io ary ahoana no hahatonga azy ho iray?
Dream interpretation - ny nify, ahoana no fomba handikana azy toy izany?
Mivandravandra ny endriky ny tarehy ao an-trano
Broccoli ao anaty oven miaraka amin'ny fromazy